Masuuliyiin ka tirsan Daacishta Somalia oo la xukumay…. | Kismaayo24 News Agency
Masuuliyiin ka tirsan Daacishta Somalia oo la xukumay….
Saturday September 17, 2016 - 6:54 under Somali News by admin
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya gaar ahaan qeybta Lixdanaad, ayaa maanta u fadhiisatay dacwad ciqaabeedka loo heesto xubno la sheegay in ay katirsanaayeen Daacishta Soomaaliya, kuwaa oo dhawaan lagu qabtay magaalda Baydhabo.
Xubnahan Maxkamada lasoo taagay ayaa ahaa afar nin oo la sheegay in ay ahaayeen saraakiil iyo xubno kale oo katirsanaa Daacish, waxa ayna ragan u xil saarnaayeen dialalka iyo qarxyada kooxdaasi ka fulineyso magaalada Baydhabo.
Ragan katirsanaa Daacish ee Maxkmada la saaray ayaa kala ahaa
1-C/Casiis Xasan Mursal ,oo Maxkamadu sheegtay in uu ahaa Wakiilka Kooxda Daacish eemagaalada Baydhabo, waxaaba ninkan kooxda u qaabilsabaa agaasinka dilalka iyo qarxyada kooxdaasi ka fulineyso Baydhabo.
2-Mahad Nuur Siidow oo isna lagu sheegay inuu yahay ninka kooxda daacish ay wakiilka uga dhigatay in Baydhabo uu ka fuliyo qaraxyada, waxa uuna sheegay ninkan in uu awood u leeyahay in gacantiisa uu ku sameeyo waxyaabaha qarxa.
Maxamed Sheekh Maxamed iyo Cali Maxamed Gaabow ayaa iyaguna Maxkamada sheegtay in Kooxda Daacish ay u qaabilsanaayeen fulinta Dilalka Qorsheesan ee laga geesanayao magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed.
Gaashaanle Aadan Abuukar Maxamad oo ah gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida qeybta lixdanaad ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday xubnahan katirsanaa Daacish, waxaana ragan Maxkamada ku riday min toban sano oo xabsi ciidan ah.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ayaa sidoo kale Fasaxday sadex nin oo kale oo iyana ku eedeesnaa in ay xariir la lahaayeen ragan la xukumay, Maxkamada ayaana sheegtay in ragan la fasaxay lagu waayay dambiyadii lagu soo eedeeyay.